I-Recipe Ingulube i-chops ebhakawe ngamazambane ahlambulukile
Indlu yasekhaya Ukupheka Okunye Izithako Imikhiqizo yobisi I-Parmesan
I-recipe ye-ingulube yengulube ngamakhambi negalikhi Kusukela ebuntwaneni sesijwayele ukuhlanganiswa okunjalo kwe-culinary njenge-cutlet namazambane ahlambulukile, i-pasta enomzimba futhi, ngokusemandleni onke, i-compote. Mhlawumbe, zonke lezi izitsha zingabhekwa ngokufanele njengendlela ewubuciko bokudla kweSoviet. "Iwayini elimhlophe - kuphela lezinhlanzi, elibomvu ngokudla kuphela" - omunye umthetho ongathandabuzeki ochwepheshe bezolimo zaseSoviet. Kodwa izikhathi zishintsha futhi ngesikhathi esifanayo izintandokazi zethu zithandwa. Vumelana, impilo iyindlela efanayo yokudla - okungenani iyayizonda. Ngenhlanhla, izindwendwe zanamuhla zithola i-Inthanethi, kepha lapha kukhona konke. Kulesi iresiphi, sihlangene nenyama ngokuhlobisa futhi siyabhaka ndawonye. Kwaba okumnandi kakhulu futhi kungavamile. Lesi sidlo sifanele ngisho netafula lokugubha futhi inqubo yokupheka ayikho neze inkimbinkimbi.
Ingulube ye-ngulube 400g
Amazambane ama-4 ama-pcs.
I-Cheese Parmesan 80 g
Ibhotela 20 g
Amafutha we-sunflower ahlanjulisiwe ama-3 tbsp. l.
I-pepper emhlabathini omnyama phansi i-pinch 3
Isinyathelo 1 Kule recipe, thatha: i-ngulube yengulube (sikhethile i-tenderloin), amazambane ama-4 aphakathi, amaqanda, ushizi we-Parmesan ocolekileyo oqoshiwe, ibhotela, i-parsley ehlanzekile, u-garlic, usawoti kanye nopelepele.
Isinyathelo 2 Okokuqala, cweba amazambane, uthathe ama-cubes, ugcwalise ngamanzi, inkathi ngosawoti bese upheka imizuzu engu-30, kusukela ngesikhathi sokubilisa.
Isinyathelo 3 Dweba kahle iparsley.
Isinyathelo 4 Hlanganisa i-parsley nge-garlic okufakwe, uhhafu ushizi nezinsipho ezintathu zamafutha omifino. Ungagaya zonke izithako ku-blender.
Isinyathelo 5 Sika inyama ibe yizicucu eziphakathi bese uwashaya kancane. Usawoti kanye nopelepele.
Isinyathelo 6 Thela ama-chops ku-pasta ephekwe, bese ucindezela kahle ngezandla zakho ingxube ye-breadcrumb inyama.
Isinyathelo 7 Fryza ingulube epanini lokuthosa imizuzu engu-3-4 ohlangothini ngalunye.
Isinyathelo 8 Beka inyama ebhodini lokubhaka.
Isinyathelo 9 Ngamazambane abilisiwe, khipha amanzi. Engeza ucezu lwebhotela bese uvumele ukuthi ligcwale kancane.
Isinyathelo 10 Phula amazambane ashisayo kumazambane ahlambulukile.
Isinyathelo 11 Thatha iqanda bese uhlukanisa amaprotheni avela ku-yolk. Amaprotheni ahlanganisa i-mixer esimweni se-foam esiqinile.
Isinyathelo 12 Yengeza amaprotheni ku-puree uhlanganise.
Isinyathelo 13 Hlanganisa izikhupha kalula nge-whisk noma imfoloko.
Isinyathelo 14 Yengeza izikhupha kanye nengxenye esele ye-Parmesan ushizi emazambeni ahlambulukile. Hlanganisa.
Isinyathelo 15 Puree esikhwameni se-confectioner. Ngenyama ngayinye ithulule esikhwameni se-pastry samazambane ahlambulukile. Bhaka amaminithi angu-25 kuhhavini, uphefumulelwe ku-180 ° C.
Isinyathelo 16 Sisebenzela izitsha njengesidlo esisodwa noma ngesaladi eluhlaza yemifino.
I-Risotto ene-zucchini no-squash
Amaqanda aqhekeziwe abhakabhaka nemifino
I-squash ye-spaghetti ene-meatballs nesipinashi
Amazambane aphekwe ne-rosemary ne-parmesan
Ikhekhe le-Corn Flour
Imfashini ephezulu kubantu: iqoqo elisha lika-Balmain le-H & M
Ingane ivame ukugula enkulisa
Izinkinga zeminyaka yobudala bomndeni
Ukunakekelwa Okubhekene Nokuguga Okumelana Nokuguga
Isibikezelo sezinkanyezi ngo-2010 sabaculi
I-cream yamanzi nge-icing icing
Kungenzeka yini ngamafutha aseLenten, izimpahla eziphekiwe, amaqanda, ama-pancake e-Lent?
Amalensi wokuxhumana, ongakhetha kanjani?
Isicelo se-ikhabethe sesikhumba nezinwele
Vinotherapy - ukwelashwa kwewayini ngobuhle nempilo
Indlela yokuhlela ukuxhumana nengane engakhulumi emndenini?